Yini i-Auto Belay? | Izinhlelo Zokukhuphuka Eziphelele Eziphelele
Yini i-Auto Belay?
Esikhundleni samabhande ahlukanisiwe nezintambo zokukhuphuka zendabuko, amabhendi e-Perfect Descent auto azithathela kancane njengoba umgibeli ekhuphuka ngomzila futhi enikeza ukwehla okubushelelezi nokulawulwayo lapho umgibeli efika phezulu noma ewa. Sebenzisa Ukwehla Okuphelele ejimini yakho, odongeni lwakho, noma ekamu lakho kunciphisa izithiyo, kwakha izinketho eziningi, futhi kusekele uhla olunzulu lokuqeqeshwa kanye nezinhlelo zokuqina. I-Perfect Descent auto belays inikeza abagibeli inkululeko yokukhuphuka lapho befuna nokuthi bafuna kanjani ngenkathi begcina opharetha imali nokunciphisa izingozi ezihlobene ne-belay.
Susa Iphutha le-Belayer
Abasebenzisi be-Perfect Descent bayazi futhi nocwaningo lukhombisa ukuthi amaphutha ngabashayeli yingozi enkulu ehlotshaniswa nokulimala okukhulu ngenkathi kukhuphuka. Ukuqeqesha nokwengamela ama-belayers kuthatha isikhathi nokunamathela ngokuqinile kunqubo. Naphezu kwemizamo emikhulu yokufundisa nokuqinisekisa ama-belayers, amandla wephutha lomuntu kanye nokuphelelwa yisikhathi ekuqondisweni kuhlale kukhona. I-Perfect Descent auto belays inika opharetha amandla amakhulu ekuphatheni izingozi ezihlobene ne-belay ngokuthatha ukuphepha ezandleni zabagibeli nokunciphisa okuguqukayo okungaholela engozini.
Umhlinzeki Osemthethweni we-IFSC neMidlalo yama-Olimpiki
Isetshenziswa emincintiswaneni yokuqwala embulungeni yonke, i-Perfect Descent yi-auto belay ekhethekile yemicimbi ye-IFSC Speed ​​Climbing. I-Perfect Descent Speed ​​Drive Technology ihambisana nabagibeli abasheshayo emhlabeni ukuqinisekisa ukuphathwa kwe-belay okungaguquguquki nokungabi namaphutha. Ukukhuphuka kwezemidlalo kufaka phakathi ukuhola, isivinini, namatshe amakhulu kuzoqala ukubonakala kuma-Olympic Games ngo-2021 eTokyo, eJapan. I-Perfect Descent ingumsekeli oziqhenyayo wohambo lwama-Olimpiki futhi ixhasa i-IFSC, imincintiswano ekhuphuka emhlabeni wonke, nabasubathi okubalwa kubo uSean McColl, uKai Lightner, uJohn Brosler, noPiper Kelly.
Dala Ithuba Lokuqeqesha Elithe xaxa
Ukwehla okuphelele kungumlingani okhuphukayo ophelele; angalokothi aphazamiseke futhi ahlale ekulungele ukuhamba. Akusekho amashejuli wokuxhumanisa nokushintshanisa amabhande. Bamba iseshini esheshayo futhi ufeze okuningi ngesikhathi esincane. Qeqesha njengochwepheshe ngokwakha amasekethe, ukwenza amathebhu, nezikhawu zesikhathi. Hlangana nezinhloso zokufaneleka ngenkathi ucija inqubo, ukwakha amandla, nokuqinisa ukukhuthazela Fudumeza masisha ekuqaleni kweseshini yakho bese wehla umqansa ukuze uthuthukise ukusebenza kwezinyawo. Ukwehla Okuphelele kuyithuluzi elibucayi lokuziqeqesha kwanamuhla kanye nomqali onomqondo ofanelekile ofuna ukuzuza kakhulu ngesikhathi sabo odongeni.
Dilizani izithiyo bese nithola abagibeli abasha kanye nabesikhathi esisodwa odongeni ngesikhathi esincane nangomzamo omncane. I-Perfect Descent auto belays inikezela abagibeli inkululeko engaphezulu futhi idinga ukuxhaswa okuncane okuqondile kwabasebenzi. I-carabiner yokukhiya kathathu yenza uxhumano lwe-belay-to-harness lube lula futhi kulula ukuhlola nokuqapha. Nweba izinketho zezinhlelo ezisezingeni eliphakeme, ezinabasebenzi abaphansi, futhi uvule imizila nesikhala somcimbi ngokushesha okukhulu nangempumelelo.